Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Music » Obodo egwu kacha elu 10 n'ụwa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Entertainment • Akụkọ Ejiji • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • nzukọ • Music • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA
London nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke egwu egwu na -abịanụ (5,088) yana ọnụọgụ egwu nke abụọ kachasị elu (207). Ihe karịrị ndị ọrụ nka 2,500 na -akpọ ụlọ obodo, gụnyere ndị omenkà dịka Elton John, Queen, David Bowie na Adele.
Ndị ọkachamara na -ahụ maka njem na egwu enyochala obodo ndị egwu kacha wee tụọ obodo kacha mma n'ụwa maka egwu dị ndụ.
Chicago, United States, bụ obodo kachasị mma maka mmemme egwu egwu, ebe 22 na -eme n'obodo kwa afọ.
Ka ọ dị ugbu a, obodo na -akwado ihe nkiri egwu kachasị mma bụ Las Vegas, United States, yana 26.6% nke egwu niile dị n'obodo na -ada n'okpuru ụdị.
Ka ụwa na -amalite imepe ọzọ na ndị na -achọsi ike ịhụ ndị egwu na -amasị ha, ndị ọkachamara njem na egwu ụlọ ọrụ enyochala obodo kachasị egwu ụwa iji kpughee obodo kacha mma n'ụwa maka egwu dị ndụ.
Onye njem na -eto eto na -eme atụmatụ njem ezumike yana ịchọ ozi ma ọ bụ idobe ụlọ nkwari akụ na laptọọpụ, echiche njem
Iji duzie ọmụmụ ihe ahụ, e nyere obodo akara ruru 10 n'ime ihe ọ bụla, gụnyere ọnụ ọgụgụ ebe egwu kwa obodo, mmemme egwu na -abịanụ, nnukwu mmemme egwu na ọnụ ọgụgụ ndị na -ese ihe si n'obodo ọ bụla.
Obodo kacha mma zuru ụwa ọnụ maka egwu ndụ na 2021
n'usoro Obodo, Mba Population Ọnụọgụ nke ebe egwu Ihe nkiri na -abịa Mmemme egwu egwu Ndị na -ese ihe & ndị otu sitere n'obodo Egwuregwu egwu dị ndụ /10
Inweta okpueze maka obodo kacha mma maka egwu egwu bụ London, United Kingdom
London nwere ọnụ ọgụgụ kacha elu nke egwu egwu na -abịanụ (5,088) yana ọnụọgụ egwu nke abụọ kachasị elu (207). Ihe karịrị ndị ọrụ nka 2,500 na -akpọ ụlọ obodo, gụnyere ndị omenkà dịka Elton John, Queen, David Bowie na Adele.